Iindaba eNigeria nangaphaya: UMzalwana oMkhulu u-Naija Ukuhlangana kwakhona komoya + Okungakumbi
Big Umzalwana uNaija Reunion bonisa i-airing nge-1 kaJuni, umfazi wobuhlanga kwi-vidiyo ye-virus ebusweni, uZlatan Ibrahimovic unesifo sokulimala kwethole. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. BBNaija Pepper Dem indibano yomoya ngoJuni 1 kwi-Afrika yeMilingo Ubhuti omkhulu naija pepper dem kukuhlangana kwakhona 2020
Iposta yenkuthazo yeBig Brother Naija Pepper Dem Reunion Show
I-MultiChoice ibhengeze ukubuya kweBig Brother Naija Reunion Show eza kubonisa abahlali basekhaya kwiXesha lePepper Dem ngoMvulo, nge-1 kaJuni kwi-Africa magic Urban (DStv Channel 153) nge-7 pm kunye ne-Africa magic Family (DStv Channel 154 ne-GOtv Channel 129 ) nge-7: 30 pm. Ubhuti omkhulu naija pepper dem kukuhlangana kwakhona 2020
Abalandeli bakaBig Brother Naija baya kuphathwa ngawona mmandla ubonayo kwakhona kodwa othembisa ukuzaliswa kukukhathazeka ngokweemvakalelo, ukumangaliswa kwendalo kunye nelinye ixesha elimangalisayo elikhonzwe liqela le-BBNaija Pepper Dem Ebuka Obi-Uchendu. Umboniso uza kuvumela ababukeli ukuba baphile ngobomi be-BBNaija alumni kwiinyanga ezisixhenxe emva komdlalo.
2. Ingingqi yeNtshona ngoku yindawo ekuza kubakho kuyo ii-coronavirus eGhana
UGqr Patrick Kuma Aboagye kwisikhululo seenqwelomoya ngoMgqibelo ophelileyo, xa bamkelekile eGhana evela eKuwait
UMlawuli-Jikelele weNkonzo yezeMpilo yaseGhana (GHS), uGqr UPatrick Kuma Aboagye Othe wenza lo Lwesibini waziwe wathi amatyala amatsha arekhodiwe eTarkwa, Sekondi nase Takoradi.
Ukuza kuthi ga ngoku, umda weAshanti, kanye eObuasi naseKumasi yayiziindawo ezinomtsalane kodwa ngoku uguqukele kwiNgingqi yaseNtshona. Ingingqi yeNtshona ukusukela nge-26 kaCawe, nge-2020 kaMeyi, ngo-334, yabhala iimeko ezingama-272 zizonke zesifo. Indawo yase-Obuasi yodwa e-Ashanti irekhode amatyala angama-1,066 kwibala elipheleleyo le-XNUMX.
Ethetha nengxoxo nabezindaba ngoLwesibini kusasa, uGqr Kuma Aboagye uthe u-Obuasi uphantsi kolawulo, nangona kunjalo, amatyala amaninzi avela kwi-Western Region ekufuneka kujongwane nawo.
3. Ukuvalwa kwe-coronavirus eMzantsi Afrika ukuze kuthambe ukususela nge-1 kaJuni
Umongameli uCyril Ramaphosa
UMongameli waseMzantsi Afrika UCyril Ramaphosa Uvakalise ukulungiswa okungaphaya kokuthintelwa kwecoronavirus ukusukela kwinyanga ezayo kwisithuba esizakuvumela uninzi lwamacandelo oqoqosho ukuba luvuseleleke ngokupheleleyo phantsi kwemigaqo engqongqo yezempilo kunye nemithetho yokungena eluntwini.
URamaphosa uthethe kwidilesi yomabonakude nge-Cawa ukuba ikhabinet igqibe kwelokuba ihambise ilizwe kwinqanaba lesithathu lwendlela yalo yomgangatho emihlanu yokuvuselela ukuvalwa kwe-coronavirus ukusuka nge-1 kaJuni. Ubhuti omkhulu naija pepper dem kukuhlangana kwakhona 2020
Uqoqosho oluhambele phambili kwezoqoqosho e-Afrika luvaliwe kakhulu ukusuka ngasekupheleni kuka-Matshi xa urhulumente wanyanzelisa ezinye zezithintelo ezingqongqo kwihlabathi ngokuzama ukuzama nokucutha ukusasazeka kwe-coronavirus ethe yathelela abantu abayi-22,583 kwaza kwabulawa abangama-429 kweli lizwe.
4. Umfazi ujongene nembonakalo yevidiyo yobuhlanga eya kwiCentral Park yevidiyo
Owu, xa uKarens ethatha uhambo lokuhamba nenja yakhe kwi-Bramble edumileyo kwi-Central Park yase-NY, apho kubhalwe khona ngokucacileyo ukuba izinja KUFUNEKA ziqeshiswe ngalo lonke ixesha, kwaye umntu onjengomntakwethu (umgqibeli ozimiseleyo) uyambuza ngentlonelo. ukubeka inja yakhe kwi-leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm
-Melody Cooper (@melodyMcooper) Ngamana 25, 2020
Inkampani yotyalo mali eqeshe umfazi omhlophe ochongwe I-Amy Copper ngubani ohambe enobuzaza emva kokubiza amapolisa kwindoda emnyama eCentral Park ngoMvulo wayibeka kwikhefu lokuphatha.
Indoda enokuva kwividiyo, Umnxibelelanisi ongumKristu, yabuza uAmy ngoku ebizwa ngokuba 'nguKaren' ukuba ayibambe inja, wathi xa engakwenzi, yacela ukuba inyange inja. Umboniso we-akhawunti yakhe ye-LinkedIn ekwabelwana ngayo kwi-Twitter wamchonga njengentloko yezisombululo ze-inshurensi zotyalo-mali eFranklin Templeton.
Abasebenzisi beendaba zosasazo baphinde batyhola uAmy ngesikhohlakali sesilwanyana, njengoko wabonwa ekubambeni ividiyo kwaye ehudula inja esokolayo ngentambo yeentambo. ISebe lamaPolisa laseNew York lijonga eli tyala njengoko linokujongana nezityholo zolwaphulo-mthetho.
5. UZlatan Ibrahimovic unesifo sokulimala kwethole
U-Ibrahimovic ufake amanqaku amane ukusukela ku-AC Milan ngoDisemba
Umdlali we-AC Milan Zlatan Ibrahimovic Unokulimala kwethole kwaye uya kuvavanywa kwakhona kwiintsuku ezili-10, iklabhu ithe.
I-Switzerland, i-38, yafumana ukulimala ngoqeqesho ngoMvulo kwaye iingxelo zathi zingasongela umsebenzi. Kodwa, iimvavanyo ziqinisekisile ukuba ngaphambili iManchester United iye yalimaza ithole lakhe lasekunene, kunokuba i-Achilles tendon yakhe.
U-Ibrahimovic uphinde uMilan kwisivumelwano seenyanga ezintandathu ngoDisemba, wafumana amanqaku amane ngokubonakala kwe-10. Ubhuti omkhulu naija pepper dem kukuhlangana kwakhona 2020
Uhlobo Rave Ngamana 26, 2020